Kitra – THB champions league :: Nitrangana famelezana mpitsara ny lalaon’ ny AS Adema sy FCA Ilakaka • AoRaha
Niteraka korontana, teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny fanapahan-kevitry ny mpitsara nandritra ny lalaon’ny AS Adema Analamanga sy ny FCA Ilakaka Ihorombe, namarana ny andro fahadimy amin’ny fifaninanam-pirenena ho an’ny Diviziona nasionaly, taranja baolina kitra. Taorian’ireo fihetsika nifanohitra tamin’ny toe-tsaina mpanao fanatanjahantena nataon’ireo mpilalaon’ny FCA Ilakaka dia voatery namoaka karatra mena roa ny mpitsara ny lalao.
Tsy levon’ny vavonin’ny filohan’ny Ligin’Ihorombe sady Ben’ny tanànan’Ihosy anefa izany ka niakatra ny kianja izy ka namely totohondry ny mpitsara fahefatra, izay nanakana azy tsy ho eny amin’ireo mpitsara, teny an-kianja. Niezaka ny nandamina azy ihany koa ny filohan’ny Ligin’Analamanga sy ny mpanara-maso ny lalao saingy natosik’ity lehiben’ny delegasionan’Ihorombe ity hatrany.
“Nahoana no tsy nomena karatra mena ny mpilalaon’ny AS Adema, izay niteny ratsy?”, hoy ity Ben’ny tanànan’Ihosy ity tamin’ny feo avo sady nisisika ny ho eny amin’ny mpitsara afovoany hatrany. Andrasana ny sazy ho an’ity mpitantana ny baolina kitra avy any Ihorombe ity, noho izany fihetsika izany. Andrasana toy izany ihany koa ny tatitr’ireo mpitsara sy ny mpanara-maso ny lalao.
Momba ny lalao indray dia nisaraka ady sahala, 2 sy 2, ny ekipa roa tonta. Mbola mitana ny toerana faharoa vonjimaika ny AS Adema (isa 9), aorian’ny Fosa Juniors (isa 11). Mbola any amin’ny laharana farany kosa ny FCA Ilakaka (isa 3). Hitohy amin’ny 29 sy 30 jona ho avy izao ny andro fahenina amin’ity fifaninanana ity.
Baolina kitra – CAN 2019 :: Mino ny fiakaran’ny Barea amin’ ny ampahavalon-dalana i Nicolas Dupuis
Basket- ball N1A lahy/vavy :: Manjakazaka any Antsiranana ny GNBC sy MB2All